Shinoa Tsara tarehy an-dakozia an-tsambo any China sy ny orinasa sy ny mpamatsy | Hoyer
Tsara ny lakozia fitaratra tsara tarehy miaraka amin'ny Stainless vy Lid
Ny kiraro matevina amin'ny landy hiantoka ny fahamasinana maharitra ho an'ny sakafonao!
Aza miahiahy intsony momba ny resaka amin'ny mpiadidy taloha izay sarotra be loatra ny misokatra sy mihidy! Ireo kodiarana amin'ny fitotoana ireo dia novolavain-tsolika natao hanakodia sy hivezivezy mora foana. Ireo vongan-tsoavaly tsara tarehy Stainless Steel koa dia mihazona ny fanakatonana henjana mba hisorohana ny sakafo tsy hahavelona ny fahamasinana, ka tsy mila miahiahy ny tenanao amin'ny pasta, oats, na voan-kafe ianao.
Volume: 2100ml / 72 oz
Haavo: 275mm / 10.8 santimetatra
savaivony: 110mm / 4.33 santimetatra
Ireo fitaovana ambony: vera borosilicate, BPA maimaim-poana, azo antoka, tsy manapoizina, alohan'ny fihodinana, azo averina malalaka, mahatohitra ny hihoatra, ary ny hafanana avo.
Ny sarony voaisy tombo-kase: ny efitra lamba dia vita amin'ny vy matevina avo lenta, izay efa nisedra imbetsaka sy namboarintsika matetika mba hisorohana ny fikorianan'ny tsiranoka ary fitehirizana sakafo tsara kokoa.
Mora diovina: malalaka ny vava, mora misasa tànana na lovia, milina fanasana vilia sy manome fotoana anao.
ASES samihafa: ny fitoeran-tsakafo fitahirizan-tsakafo dia tsy vitan'ny hoe mitazona sakafo toy ny tsaramaso, voankazo maina, vary, siramamy, zava-manitra, snacks, tantely, sy ny sisa.
Aorian'ny famarotana: raha manana fanontaniana momba ny vokatra izahay dia aza misalasala mifandray aminay haingana dia hiatrika ny fahafaham-ponao avy hatrany izahay. Ny tsikinao, ny irinay.
Fantaro ireo votoaty mora: Raha mpihinana toa ahy ianao dia mamela anao hahita ireo tsaramaso miloko loko nofidinao ireto mpitsara mazava ireto. Vita avy amin'ny fitaratra matanjaka mahery indrindra dia ho afaka hamantatra ianao ary hisafidy izay sakafo matsiro ao amin'ny kanistanao!
Kivy ve ianao satria tsy hainao ny manadio ny lakozia?
Mihomehy ve ianao satria tsy fantatrao izay ao anaty siny?
Mbola mankahala ve ianao hoe ohatrinona ny haben'ny fitahirizan-kaontinao?
TSY MISY HESITATEO HANOHANA NY TOKONY HAFA ARY ATO KARTO FAMPIASA ANAO! MISAOTRA NY FIAINANAO ARY ARAKAO!
Size Boky: 500/900/1100/1800 / 2100ml Haavony: 7.7 / 12/17/22 / 27.5 cm Diameter: 11 cm Boky: 17.6 / 31.7 / 38.7 / 63.4 / 73.9 oz Haavony: 3.03 / 4.72 / 6.69 / 8.66 / 10.83 santimetatra Diameter: 4.33 santimetatra
Previous: Fitahirizan-tsakafo fitahirizan-tsakafo amin'ny alàlan'ny rano eny an-tsokosoko an'habakabaka
Manaraka: Sakafo Whisky fitaratra ho an'ny alikaola
tavoahangy sakafo misy sarony
siny siny fitahirizana lehibe
fitahirizan-drano ao an-dakozia